Jacob Zuma Archives - Zimbabwe Online News
Why Zuma changed tack on Zim
SOUTH Africa has the potential and the desire to lead in Africa. It has an economy far larger than any in Southern Africa and an advanced and powerful military.The post Why Zuma changed tack on Zim appeared first on The Zimbabwe Independent.
SA President Jacob Zuma’s facilitation team spokesperson Lindiwe Zulu says the MDC parties failed to use their leverage during the protracted talks to secure reforms from Zanu PF before elections.
The post Zulu speaks out on elections roadmap appeared first on The Zimbabwe Independent.
‘SA has vested interest in Zim vote’
WITH a big vested interest in the stability of Zimbabwe, South Africa is keen that next week’s election in its northern neighbour should fairly reflect the people’s wishes, Deputy President [...]
The post ‘SA has vested interest in Zim vote’ appeared first on The Zimbabwe Independent.